SPA Podcasts Archives - Somali Public Agenda
Archive for category: SPA Podcasts
1 dii May ee sanadkan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa dib uga laabtay muddo kordhintii labada sano ahayd ee uu horey u sameeyay 12-kii April kadib markii uu madaxweynaha u jeediyey khudbad uu kaga codsanayo in dib loogu laabto heshiiskii 17-ka September ee doorashada dadban.
Isbuucii ka horreeyay dib uga laabashada golaha shacabka ee muddo kordhinta, Muqdisho waxaa ka dhacay dagaallo u dhexeeyay ciidamo ka wada tirsan dowladda kaasoo ka dhashay muddo kordhinta. Kumannaan qof ayaana ku barakacay xiisaddaas ka dhalatay muddo kordhinta.
Masuuliyadda hoggaaminta arrimaha doorashada iyo sidoo kale amniga doorashada waxaa lagu wareejiyey Raysal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Raysal wasaaraha ayaa ku guuleystay in ciidamadii ka hor yimid muddo kordhinta ay dib ugu laabtaan xarumahoodii. Waxa uu sidoo kale iclaamiyey in 20-ka bisha May uu dhici doono kulan u dhexeeya madaxda dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Benadir oo looga hadlayo arrimaha lagu muransan yahay ee doorashada.
Xasilloonida iyo Daahfurnaanta Hannaanka Doorashada dadban ee Soomaaliya (SPA Governance Podcast)
January 26, 2021 /0 Comments/in Multimedia, SPA Podcasts /by Somali Public Agenda
17-kii Sebteembar, hoggaanka Dowladda Federaalka iyo Dowlad-goboleedyada waxay ku heshiiyeen nooc doorasho dadban ah in ay ka dhacdo dalka. Iyadoo laga ambaqaadayo doodo taxane ah oo Dhuusamareeb ku qabsoomay bilaha Luulyo iyo Ogosto, doorashada lagu heshiyey ayuu baarlamaanku ansixiyay waxaana lagu faahfaahiyay heshiisyadii xigay ee 2-dii Oktoobar.
Inkastoo heshiisku muujiyay in hoggaamiyeyaasha Soomaalidu ay gaareen is-faham aad loogu baahnaa kuna saabsan qaabeynta doorashada, haddana waxaa jira dulduleello badan iyo mugdi jira oo haddii aan wax laga qaban khatar gelin kara daahfurnaanta iyo in loo dhanyahay geeddi-socodka doorashada. Waxa kale oo jira arrimo siyaasadeed oo muran badan dhaliyay oo haddii aan la xallin ay sidoo kale kordhin karaan halista isku dhacyada dhalan kara bilaha soo socda.
Podcast-gan waxa lagu falanqeynayaa nuxurka warbixinta falanqeyneysa arrimaha khilaafka ka jiro ee doorashooyinka Soomaaliya oo ay wada daabaceen Somali Dialogue Platform iyo Somali Public Agenda.
https://somalipublicagenda.org/wp-content/uploads/2021/01/SPA-Governance-Podcast.jpeg 605 604 Somali Public Agenda https://somalipublicagenda.org/wp-content/uploads/2019/04/SPA-Logo-278x300.jpg Somali Public Agenda2021-01-26 09:23:062021-01-26 09:23:06Xasilloonida iyo Daahfurnaanta Hannaanka Doorashada dadban ee Soomaaliya (SPA Governance Podcast)
Dhismaha Xukuumadda Xigta ee Soomaaliya (SPA Governance Podcast)
25-kii June baarlamaanka Soomaaliya ayaa riday xukuumaddii uu hoggaaminayay raysal wasaare Xasan Cali Khayre. Ilaa wakhtigan xukuumad cusub lamasoo dhisin.
Xukuumadda waxa la riday maalmo yar kadib markii uu soo idlaaday shirkii Dhuusamareeb 2 oo ay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu uga hadlayeen nooca doorashada suuragalka ah in ay ku qabsoonto wakhtiga u haray hay’adaha federaalka.
Maxamed Cabdirisaaq waa aasaasaha iyo agaasimaha Finance, Development, and Governance Synergy Limited (FDG-Synergy). Kahor inta aanu billaabin SDG Synergy, waxa uu Maxamed Maareeyaha mashruuca Platform for Political Dialogue and Accommodation in Somalia (Madasha Wadahadallada Soomaaliya) u ahaa hay’adda Conflict Dynamics International. Waxa uu sidoo kale Maxamed horey usoo noqday lataliyaha Madaxweye Farmaajo ee arrimaha doorashooyinka. Sidoo kale, Maxamed waxa uu horey isugu sharraxay xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Podcast-gan waxa lagu falanqeynayaa nuxurka warbixinta taxliilineysa dhismaha xukuumadda xigta ee Soomaaliya oo ay daabaceen Machadka Rift Valley iyo FDG Synergy.
https://somalipublicagenda.org/wp-content/uploads/2021/01/photo_2020-08-20_11-17-12.jpg 720 1280 Somali Public Agenda https://somalipublicagenda.org/wp-content/uploads/2019/04/SPA-Logo-278x300.jpg Somali Public Agenda2021-01-26 09:05:542021-01-26 09:05:54Dhismaha Xukuumadda Xigta ee Soomaaliya (SPA Governance Podcast)